Root Letrrozole (Femara) budada (112809-51-5) hplc = 98% | AASraw
Biyo budo ah oo loo yaqaan 'Letrozole (Femara)
/ Products / Dawooyinka PCT / Feeraha loo yaqaan 'Letrzol' (Femara)
SKU: 112809-51-5. Category: Dawooyinka PCT
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaas ah oo ah budada Letrzzole (Femara) (112809-51-5), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka kantaroolka tayada la socon karo.
Video ee budada loo yaqaan 'Letrozole (Femara)
Letrozole (Femara) Calaamadaha asaasiga ah
Formula kelli: C17H11N5
Miisaankani waa: 285.31
Dhibcaha Biyaha: 181-183 ° C
Qalabka beerka ee Letrozole (Femara) ee isticmaalka budada
Magaca Guud: Letrozole (LET roe zol)
Magacyada Waalidiinta: Femara (CAS 112809-51-5)
(Femara Femara) Isticmaalka budada Letrozole
Tilmaamaha guud, waxaan ku talineynaa 0.36 mg / maalin oo ah xaddiga aasaasiga ah ee wareegga anomolic steroid oo leh qadar yar oo ah steroids sambabada, sida 200-300 mg / toddobaadkii testosterone. Qadar sarreeya sida 750 mg / usbuuc, qadarkan badanaa waa la labanlaabayaa. Guud ahaan wax ka badan 1 mg / maalin waa in la qaataa ilaa laga eego baaritaanka dhiigga oo muujiya estradiol oo aan caadi aheyn xitaa heerkaas, laakiin taasi marar dhif ah.
Digniin ku saabsan (budada Femara) budada Letrozole
Inkastoo aysan u muuqan in haweeney postmenopausal ay uur leedahay, Femara waxay dhaawici kartaa ilmaha aan dhalan. Ha qaadan dawadan haddii aad uur leedahay ama uur yeelato. Isticmaal xakameynta dhalmada oo hagaagsan haddii aadan horey u qabin hawo-mareenka, iyo dhakhtarka tellyour isla markiiba haddii aad uur leedahay inta lagu jiro daaweynta.
Lama ogaan karo in haayosrole uu u gudbiyo caanaha naaska ama haddii ay dhibaato u keeni karto ilmo xanaaneeyn ah. Waa inaadan naas nuujin adigoo isticmaalaya Femara.
Daawooyinka kale waxay la macaamili karaan lyingrozole, oo ay ka mid yihiin dawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa la iibsado, fitamiinnada, iyo alaabta dhirta. U sheeg mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka wixii ku saabsan dhammaan daawooyinka aad hadda isticmaashid iyo dawooyinka aad bilowdo ama joojiso isticmaalka.
Letrozole / Femara Root Powder (CAS 112809-51-5)
(Feeraha Femara) Suuq-geynta Poulrose Poultry
IV. Sidee loo iibsadaa budada Femara (CAS 112809-51-5): iibsato budada Letrozole laga bilaabo AASraw?
Cagaarshowga AAS wuxuu bixiyaa nadiif ah 98% Letrozole / Femara caano boodh ah oo loogu talagalay jir-dhiska jirka ama sheyaalka dhulka hoostiisa ee isticmaalka cirbadaha.
Letrozole / Femara Rootiinka Rootiga ah
PCT Letrozole budada cayriin-Shan waxyaabood waa inaan ogaadaa !!!
dib u eegis 1 waayo, Biyo budo ah oo loo yaqaan 'Letrozole (Femara)
Kiniinada Letrozole (Femara) waa budhcad
Isbaarada Clomiphene Citrat (Clomid)